Madaxweynaha Iran oo Qayaxay filashadooda Joe Biden | Berberanews.com
Home WARARKA Madaxweynaha Iran oo Qayaxay filashadooda Joe Biden
Madaxweynaha Iran oo Qayaxay filashadooda Joe Biden
Iran-(Berberanews)-Iran iyo Mareykanku waxay si buuxda u beddeli karaan afartii sano ee Donald Trump waxayna ku laaban karaan xaaladihiisii ​​ka hor inta uusan noqon madaxweynaha, madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa yidhi.
Khudbad uu Arbacadii jeediyay golaha wasiirrada ee telefishanka, ayuu Rouhani ku sheegay haddii maamulka soo socda ee Joe Biden uu leeyahay rabitaan siyaasadeed, xidhiidhka Iran iyo Mareykanka uu aad uga duwanaan karo.
“Iran iyo Mareykanka labaduba waxay go’aansan karaan kuna dhawaaqi karaan inay ku laaban doonaan xaaladahii January 20, 2017,” ayuu yidhi.
“Tani waxay xal weyn u noqon kartaa arrimo badan oo gebi ahaanba beddelaya waddada iyo xaaladaha.”
Si kastaba ha noqotee, Rouhani wuxuu qeexay waxa Iran ka filan karto mustaqbalka madaxweyne Biden.
“Waxaan rajeyneynaa in tallaabooyinkeeda ugu horreeya, maamulka soo socda ee Mareykanka uu si cad u cambaareyn doono siyaasadaha Trump ee Iiraan,” ayuu yidhi madaxweynaha, isagoo ugu yeedhay siyaasadaha “xuquuqda aadanaha iyo argagixisada ka soo horjeedka”.
Previous articleWarbixin roobabkii ka da’ay Gobolka Saaxil
Next articleAbbiy Ahmed oo qaaddacay waanwaantii Beesha Caalamka